Home SOUTH AMERICA FOOTBALL ụmụaka Antonio Valencia Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Famous Footballer onye amara aha ya mara; "Onyeisi". Ụmụaka Antonio Valencia Akụkọ nke a na-eme ka ị nweta akụkọ zuru ezu nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amaghị ihe banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ike ya na ntụgharị, ma ole na ole na-eche banyere Antonio Valencia's Bio nke bụ ihe na-adọrọ mmasị. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
Antonio Valencia Ụmụaka Akụkọ nke Na -Ndụ mbido
A mụrụ Luis Antonio Valencia Mosquera na 4th August 1985 na Lago Agrio, dị nso na obodo Nueva Loja, Ecuador, nke dị na Amazon Amazon. A mụrụ ya na nne ya, Teresa Mosquera na nna, Luis Antonio Valencia. Ha abụọ bụ ndị ahịa dị nta.
Nwa nwoke dị jụụ, onye na-arụsi ọrụ ike na onye ihere n'oge ọ bụ nwata, Antonio Valencia bụ nwata nwere ọgụgụ isi na klas ya. Ọ bụ onye na-agba ya nso ọbụna mgbe ọ na-amụ akwụkwọ. Mgbe oge ụlọ akwụkwọ gasịrị, Valencia ga - enyere nne ya aka ịṅụ mmanya n'èzí ámá egwuregwu nke ụlọ ọrụ ya dị na Lago Agrio.
N'ịbụ onye na-etolite, Antonio Valencia nyekwara nna ya aka bụ onye ahịa. Ya na ụmụnne ya nwoke abụọ ga-achọ n'okporo ámá maka karama iko maka nna ya iji ree ego na nkwụnye ego na isi obodo, Quito. N'ezie, oge siri ike, ma nke ahụ egbochighị nwata ahụ ịhụ nrọ ya. Valencia jiri ụkwụ na-agba ụkwụ n'ọdụ ụgbọ mmiri na-esote ya na ndị mụrụ ya, ụmụnne ya nwoke na nwanne ya.
Antonio Valencia Ụmụaka Akụkọ nke Na -Nnukwu mkpebi ahụ
Mgbe Valencia bụ agadi 11, Pedro nyocha "Papi" Perlaza hụrụ ya ka ọ na-egwuri egwu n'ubi na-acha uzuzu uzu dị nso n'ebe obibi ya, ma banye ya n'ụlọ akwụkwọ mmuta egwuregwu na-eme egwuregwu na-eme egwuregwu na-eme egwuregwu na Sucumbíos. Mgbe ọ dị afọ 16, Valencia agwaghị nna ya na ọ hapụrụ ụlọ iji nweta ihe ị ga-egwu El Nacional, ụlọ agha ndị agha na Quito.
Na ya onwe ya okwu ... "Agwaghị m nna m n'ihi na amaara m na ọ gaghị ekwe ka m gaa ebe ahụ dị ize ndụ na mpụ na-eme," " Valencia kwupụtara. "Ọ bụ oge mbụ m hapụrụ ụlọ. Ụjọ jidere m ma nwee ụjọ n'ihi na amaghị m ebe m ga-ehi ụra ma ọ bụ ebe m ga-eri nri. Ma, ọ bụrụ na i nwere nrọ ma ịchọrọ ime ka ọ mezuo, nke ahụ bụ ihe ị na-eme. "
Ọ dịghị onye maara banyere mkpebi Valencia, ma e wezụga mama ya na nwanne ya nwoke nke okenye, bụ Carlos Alfredo, bụ onye kwụrụ ụgwọ maka njem njem ụgbọ elu ya nkeji asatọ. Valencia malitere na etiti etiti etiti ọnwa 50.
Ọ meriri aha mbụ ya dị ka akụkụ nke El Nacional nke meriri 2005 Clausura Tournament, na-eme ka ọtụtụ ndị na-egwu egwuregwu Europe na-eleta ya. Nke a bụ otú o si gaa Villarreal. Ka ọ na-enwe ọganihu n'ọkwá ọrụ ya, Valencia mere mkpebi iji gaa Premier League. O biri na Wigan Athletic ebe ọ na-enwe mmetụta siri ike n'oge na-adịghị anya. Nke a mere Manchester United kpọọ maka ọrụ ya. Valencia kwetara, ekele Ryan Giggs onye nkụzi ya nke kpaliri ya wetara ya njem. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Antonio Valencia Ụmụaka Akụkọ nke Na -Ndụ mmekọrịta
Valencia alụọla Zoila kemgbe 2005. Ha abụọ zutere ma daa ịhụnanya n'oge ụbọchị ebube ya na El Nacional.
Valencia lụrụ ya ngwa ngwa wee kpọga ya na Europe mgbe Villarreal kpọrọ ya. Ya na nwunye ya, Zoila, nwere nwa nwanyị aha ya bụ Domenica, onye a mụrụ n'oge 2006 World Cup. Ọ na-eto eto dị ka a hụrụ na foto dị n'okpuru ebe a.
Ụtọ: Antonio Valencia ebubo ya ebubo maka ịghọ aghụghọ ule na ya. Nwanyị a na-akpọ Sophie bụ onye e boro ebubo na Valencia na-akwụ £ 1,600 mgbe ụfọdụ maka ụgbọ elu ya si Norway Manchester.
Valencia, onye nwere nwa nwanyị na nwunye Zoila Meneses, zutere na nurse Sophie na nwa oge Manchester Hilton Hilton mgbe ọ na-esi na ya ala Norway na-aga tupu ụbọchị Manchester United. Ke ini enye okokụtde enye onyụn̄ okụt enye ke obio esie, Antonio Valencia ama ọdọn̄ leta esie aka ufọk ufọk esie. Sophie depụtara foto na mgbasa ozi ọha na eze nke envelopu nke aha aha kpakpando ahụ.
Ihe dị n'ime ya gụnyere nkọwa kọntaktị nke Antonio na rịọrọ ka ọ bụrụ enyi ya nwanyị. N'ụbọchị egwuregwu ahụ, Sophie zitere onwe ya ihe osise dị na stadium Old Trafford. Antonio zigakwara foto na vidiyo nke ahụ ya dị ka a hụrụ n'okpuru.
Ka Sophie tinye ya;
"Anyị malitere ikwusa ozi ọma na nzuzo ma mara ibe anyị. O ziteere m foto nke ya na-eme njem na ịga na Ecuador. Enwetara m otu n'ime nne ya. Ọ gwara m ugboro atọ ma ọ bụ anọ iji leta ya. Ọ nọgidere na-agwa m otú m si maa mma ma mara mma. Ana m ajụ mgbe niile. ma n'ikpeazụ, wEnwere m echiche nke abụọ, ekwetara m ma gwa ya na m dị njikere ịhụ ya. Ozugbo, o kwuru na ya ga-emeso m dị ka eze nwanyị. Echere m, sị, 'Gịnị kpatara ya?' ..Amaghị m mgbe ahụ na ọ nọ na nsogbu tupu ya ezute ụmụ nwanyị n'ịntanetị ma na-arịọ ha ka ha gaa leta ya ka ya na ha wee nwee ike ihi ụra. Ana m elele anya n'Ịntanet ma chọpụta na ọ lụrụ. Mgbe m jụrụ ya banyere alụmdi na nwunye ya, ọ sịrị na ọ nwụọla. Nke a bụ tupu anyị edina ụra. Ọ gwakwara m banyere nwunye ya, na obi adịghị ya mma na mmekọrịta ya na ya ma soro ya na 12 afọ ".
Nwunye Antonio Valencia mgbe ọ hụsịrị akụkọ banyere kọmputa banyere di ya bịara pụta iji bo ya ebubo na ọ na-esi n'ụlọ ha gaa n'ụlọ ọrụ Manchester dị iche iche iji hụ Sophie n'anya.
Ndị Fans na ọbụna onyeisi na-etikwa ndagwurugwu Valencia Jose Mourinho, ma kwuo na alụmdi na nwunye ya agafeela. Igwe kpakpando ahụ e wedara n'ala kwusiri ike, sị: "Ọ dị mkpa ịkọwapụta na ọnọdụ obodo m ugbu a bụ otu. N'oge gara aga ọnwa, Enweghi m mmekọrịta ọ bụla. Dịka ọ dị na mbụ, mgbalị m na-elekwasị anya na ọkachamara m cnwoke na nwa m nwanyị. "
Nwunye ya kwukwara na nyochaa ..."Ọ na-ewute m na alụmdi na nwunye m agafeela, enwere m ezigbo mma ma ọ bụrụ na ọ bụghị ya. Ọ bụ ọkpụkpụ. Ọ na-aghọgbu m ọtụtụ ugboro. Enwere m ọhụụ ọhụụ. Ọ na-eche na ego ya na-enye ya ike dị ukwuu ọ nwere ike ime ihe ọ bụla. "
Antonio Valencia Ụmụaka Akụkọ nke Na -Ndụ Ezinụlọ
Dika edere ya na mbu, Antonio Valencia sitere na ezighi ezi ezin ulite tupu enwere ugbua. Mgbe onye agha Ecuador bụ nwa, ụlọ ya mere osisi, ọ na-eguzokwa otu ụlọ elu. Nke a bụ ebe nne na nna ya, bụ Luis Antonio na Teresa kpụrụ ya na ụmụnne ya. N'ebe a, anyị na-enye gị nkọwa gbasara ezinụlọ ya na-amalite site na nne na nna ya.
NME: Na-amalite, Antonio Valencia nna, Luis Antonio Valencia bụ nwoke agha agha nke ndụ iji mee ka ezinụlọ ya na-adị ndụ na-eme ka ha obi ụtọ. Ọ bụ onye dị nso ụmụ ya dị ka a hụrụ na foto dị n'okpuru ebe a.
Dị ka Antonio Valencia si kwuo ya; ... "Oge m bụ nwata bụ nnọọ obi ụtọ. Papa m rụsiri ọrụ ike ma anyị nile mere ihe anyị nwere ike ime iji hụ na nri dị na tebụl anyị ". Luis Antonio agadi nwere ụlọ ahịa na-ere ahịa karama na ụmụ ya ndị nwoke nyeere ya aka kpuchie obodo ahụ na obodo ndị gbara ya gburugburu na-achọ ihe ndị a na-etinye na iko, bụ ndị e rere mgbe ahụ na Quito. N'okpuru ebe a bụ foto na-adịbeghị anya Antonio Valencia na nna ya, bụ Luis Antonio Valencia.
Nne: Nne Valencia Valencia, Doña Teresa nwekwara ọrụ nke aka ya; ọ na-ere akwụkwọ ndị dị jụụ nke mmiri dị ọcha, ihe ọṅụṅụ arazá na nri ndị ọzọ dị nso n'ámá egwuregwu football ha. N'oge ahụ, ngwaahịa ya na-enyere aka ịlụso ọkụ ọkụ nke ndị na-ahụ maka football ndị nwere mmasị ịzụ ihe ọṅụṅụ ya. Mgbe egwuregwu egwuregwu dị mkpa gafere, Antonio na nne ya ga-agba ọsọ iji nye ndị ahịa football ohere iji nweta ego ka ukwuu. N'okpuru bụ foto nke nne Valencia Valencia na nwanne ya nwanyị.
SIBLINGS: Antonio Valencia nwere nwanne aha ya bụ Éder Valencia na nwanne nwoke ọzọ aha ya bụ Alfredo Valencia. O nwekwara nwanne nwanyị aha ya bụ Jazmina Valencia. Enweghi mmekọrịta mmekọrịta ya na Enner Valencia.
Antonio Valencia Ụmụaka Akụkọ nke Na -Personal
Antonio Valencia nwere àgwà ndị a na àgwà ya.
Ike nke Antonio Valencia: Ọ bụ Creative, na-agbasi mbọ ike banyere ọrụ ya, mmesapụ aka na obi ọkụ.
Antonio Valencia adịghị ike: Ọ nwere ike ịdị mpako, isi ike, onye na-eche naanị banyere onwe ya, onye umengwụ na onye na-enweghị mgbagwoju anya na mmekọrịta.
Ihe Antonio Valencia nwere mmasị: Ụlọ ihe nkiri, na-eme ememe, na-adọrọ mmasị ụmụ nwanyị, ihe dị oke ọnụ, na-egbuke egbuke, na inwe mmekọrịta dị ụtọ.
Ihe Antonio Valencia na-achọghị: A na-eleghara ya anya, na-eche eziokwu siri ike ma na-emeghị ka eze.
Na nchịkọta, Valencia bụ onye ndu a mụrụ. Ọ bụ onye nwere ike imezu ihe ọ bụla ọ chọrọ site n'ime ya kpamkpam. N'ikpeazụ, ọ nwere ike pụrụ iche na "eze nke ọhịa."
Antonio Valencia Ụmụaka Akụkọ nke Na -Ndụ Mkpụrụ obi nke Lion
O nwere ike iju ya anya n'ihi na o nweghi onu ogugu onu ogugu kama o bu onye otu ndi ozo Juan Carlos Burbano na-ekwu na ihe nile bu facade. "Mgbe ahụ ị na-ahụ ya mgbe ụfọdụ ịhụ na ọ na-ewesa gị iwe?" ọ na-ekwu. "N'ime, ọ bụ onye obi ụtọ ma dị obiọma nke nwere nnukwu obi, ma ọdụm ahụ nke ị hụrụ n'anya ya, ọ na-eme ka ọ rụọ ọrụ maka ìgwè ndị ahụ n'èzí."
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ Antonio Valencia Childhood akụkọ na akụkọ eziokwu ndị ọzọ. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n'isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.